Dadka intooda badan waxay isticmaalaan iPhone ciyaaryahan music ah. Sidaas darteed waa lagama maarmaan in muuqaalada music aad iPhone ka muuqan shaqeeyaan. Runta waxa ay tahay in mararka qaarkood aad la kulmi doonaan dhibaatooyin dhowr music ku saabsan iPhone. Qaar ka mid ah dhibaatooyinka ugu caansan waxaa ka mid ah mugga hooseeyo, ku fashilmeen in ay u hagaagsan ama mararka qaarkood ciyaaryahan music aad ku guuldareysteen in ay ka shaqeeyaan. Wax kasta oo dhibaato aad la kulantid aad iPhone ee music waxaa bixiya in ay xal u kaa caawiyo sidii aad u xaliyo dhibka marka ay dhacdaa. Tani waa sababta aan u qeexan dhowr ka mid ah dhibaatooyinka ugu badan waa badan tahay inuu wajihi aad music iyo sida loo hagaajin mid kasta oo idinka.
1. Marka music leeyahay arrimaha syncing
Dad badan ayaa waxay soo sheegeen arrimaha marka ay isku dayaan in ay u hagaagsan ay iPhone la Lugood. Kulligood waxay sheegay in wax kasta inta jeer ay isku dayeen syncing, music ma lagu wareejiyay. Halkan waa xal fudud ku saabsan sida aad u samayn karaa si fudud. First of dhan haddii kulanka Lugood waxaa u suurta aad iPhone, waa in la fara yaabaa adiga oo isku day u hagaagsan. Sidaa darteed waa inaad gab kulan Lugood ka dibna isku day mar kale syncing. Kulankii doorasho Lugood la naafo karaa iyadoo laga faaiidaysanayo on Settings ka dibna Music.
Haddii ay tani weli ma shaqeeyaan, halkan waxa aad sameyn kartid.
Connect aad iPhone si aad u computer iyo abuurtaan Lugood. Dooranaysaa aad telefoonka ka menu dhibic u gaar ah.
Markaas Music dooro in guddi kooxda navigation markaas uncheck ah "nidaameed Music" Box ka dibna riix on Codso ama nidaameed.
Marka nidaameed waa dhameystiran nusasaace "nidaameed Music" sanduuqa ka dibna guji mar kale codso ama nidaameed.
Markaas Dami aad iPhone oo waxaan arki doonaa inay soo shaqeeyay u hagaagsan.
2. Marka aad mugga waa mid aad u Low
Waxa jira laba sababood oo aad mugga si lama filaan ah ka heli kartaa oo aad u yar yahay. Oo codkii-jeeg ah ee aad taleefan la naafada laga yaabaa taas oo macnaheedu yahay in aad iPhone ma hubi iyo qabsato aad mugga. Sababta kale waxay noqon kartaa in ay jirto cap ugu badan ee mugga loo maqli music ah. Sidaa aawadeed waxaa ka jira laba siyaabood si uu u xaliyo dhibaatada.
Cap max-mugga saar
Fur app goobaha aad telefoon iyo garaac Music. Hubi calaamadda "Xaddid Volume." Ayuu Waa in off, haddii aan la jaftaa ku yaal.
Weerar dadban ku slider ku saabsan xaq u leeyihiin inay hubiyaan in mugga ayaa lagu wadaa at max markaas waa inuu dib iyo hubi haddii uu qoraalku u Yaree Volume sida calaamad off. Waxaad hadda la tabban karo app music si aad u aragto haddii ay dhibaato mug ayaa go'an.
Calan u jeeg Sound
Settings Open iyo tubbada on music. In loo sahlo baaritaanka dhawaaqa iyo ka tago app Music iyo furto si aad u aragto haddii ay dhibaato mug ayaa go'an.
3. Marka, waxaa sanqadhaya kuma lihidin iPhone
Waa dhif ah laakiin mararka qaarkood waxaad ku waayi kartaa codka oo dhan aad iPhone. Tani caadi ahaan waa dhibaato hardware iyo waxaa jira dhowr waxyaalood oo aad samayn karto oo ku saabsan.
• Mararka qaarkood dhibaatada waxay noqon kartaa boodh ee dekedda isku xira iPhone ee. Xaaladdan oo kale, waa in aad qaadato burush oo boodhka ka.
• Waxa kale oo aad isku dayi kartaa in ay dib-u-furaysto iPhone ku galay dekedda mar kale ka dibna waxaa ay ka saareen. Mararka qaarkood software xaqa ku guuldareysto in ay ka shaqeeyaan iyo dib daarin telefoonka inay qabaan waxay ka yeeli kartaa shaqo software ah.
• Marka dhan kale ku guuldareysto, dib iPhone in uu mutaysanayo gudasho la'aanta goobaha kaliya aad u hubiso inaad leedahay gurmad ah ka hor inta aadan tan sameyn.
4. Marka Sound si fudud ma shaqeyn doono
Mararka qaarkood codka laga yaabaa inuu si fudud aan loo eegayn waxa aad isku dayi shaqeeya. Haddii ay arrintu sidaa tahay, waxaa jira xal aad u fudud in ay dhibaatada. Halkan sidii ay wax uga qaban;
• Ku hay hoos Button Hurdada iyo Button Home ee waqti isku mid ah muddo 10 ilbiriqsi ilaa aad ka aragto logo Apple ah.
• Markaas hubiyo in Settings hoostiisa ku Guud oo markaas garaac Switch Isticmaal Side in. Hubi in Aamusi aan karti.
5. Marka nidaameed uu aad u hooseeyo
Mararka qaar waxaad u baahan tahay oo keliya in aad u hagaagsan u dhacdo sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah. Waxaa jira dhowr siyaabood oo aad ku kordhin kartaa xawaaraha ee Lugood dhamays syncing ah. Ka hor inta aan helno in sida loo xaliyo dhibaatadan, waxaa muhiim ah in la ogaado in dhibaatada waxaa keeni kara arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin faylasha aad u ballaaran. Iyadoo aan loo eegayn sababta dhibaatada, mid ka mid ah xal u shaqeeyaan waa.
Dib ugu soo iCloud
Haddii aad qabtid qaar ka mid ah files warbaahinta in aad rabto in aad u hagaagsan oo Lugood, habka ugu fudud ee aad u hesho Lugood loo sameeyo si dhakhso ah waa in ay gurmad la isticmaalayo iCloud hore. Tani waa sababta ka dib markii Lugood syncing had iyo jeer si toos ah dib doonaa files si ay iCloud.
U tag dhakhso by syncing yar Media Files
Tani waxay khusaysaa badan si Music laakiin gaar ahaan filimada. Uma baahnid inaad video in tayada HD tan iyo shaashad yar iPhone aan habboon HD. Sidaa darteed si loo yareeyo waqtiga ay qaadanayso in la hagaagsan, booqo macruufka kooban page in Lugood. In qaybaha Options, calaamadi sanduuqa "No Qeexid Videos Standard" iyo syncing dhakhso tegi doonaa. Waxaad sidoo kale yeelan doontaa dhaqaaqo meel laga heli karo.
Uma direeyno Information Baarista
Inkastoo macluumaadka waa mid aad waxtar u leh inay Apple oo aad isku daydo in aad u soo dir iyaga intii suurogal ah. Si kastaba ha ahaatee, diraya macluumaadkan hoos u dhigi kara geedi socodka syncing la Lugood ah. Sidaa darteed, waa in aad u gab by furan app goobaha aad iPhone dibna looga faa'idaysan on Guud. Tubada on "About" iyo kitaab ilaa hoos si aad u hesho Bioscience iyo Isticmaalka iyo markaas dooran "Ha soo dir.
sida loo sawiro ka iPhone wareejiyo iphone
Sida loo soo ceshano WhatsApp Messages on iPhone 6 / 5S / 4s / 4 / 3GS
> Resource > iPhone > Common iPhone Music Dhibaatooyinka iyo Solutions